Windows7SP1 All version ~ နေမင်းမောင် ( နည်းပညာ )
Home » Windows ခွေများ » Windows7SP1 All version
By နေမင်းမောင်12:18 AM18 comments
kyaw June 14, 2012 at 10:40 PM
ကျေးဇူးကမ္ဘာပါ .... အကို...
ကျွန်တော် လိုချင်နေတာ ကြာပါပြီ... ဒါပေမယ့် ရှာတွေ့တဲ့နေရာတိုင်းက လင့်တွေက သေနေတာ..အပိတ်ခံထားရတာတွေ များနေလို့... ယူလို့မရဘူးဖြစ်နေတာ..
အခု အကုန်လုံးကို တစ်နေရာတည်း စုပြီး တ
Loader ထဲက အကောင်းဆုံးဆိုတာလေးကို ညွှန်းပေးပါဦးဗျာ..
mone tine June 28, 2012 at 10:39 AM
ကျေးဇူးအထူး တင်ရှိပါကြောင်း ဒီထက်မကပိုပြီး တိုးတက်အောင်မြင်ပါစေ အကိုရေ
zawzaw media July 16, 2012 at 2:52 PM
thank you......i took it.
lu aye August 24, 2012 at 5:28 PM
lu aye August 26, 2012 at 12:54 PM
kyaw August 30, 2012 at 2:08 PM
ကို lu aye.. ရေ.. အကို သိချင်တာလေးကို ကျွန်တော် သိသလောက်ပြောပြပေးမယ်နော့်...
window7တင်တဲ့အခါ key လိုအပ်တာ မှန်ပါတယ်.. ဒါပေမယ့် ဘယ် Key ကို သုံးသုံး microsoft ကြီးက သိတယ်လို့ ဆိုရမယ်.. :P
ဒါကြောင့် window တင်တဲ့အခါမှ trial အနေနဲ့ ပေးလိုက်ပါ.. ပြီး ဟောဒီlink ကနေ http://www.nayminmaung.info/search/label/Windows%20Loaders .............ကြိုက်နှစ်သက်ရာ.. window7loader ကို အသုံးပြုလိုက်ရင် window က activate ဖြစ်သွားပါလိမ့်မယ်... :)
ကျွန်တော်က တော့ http://www.nayminmaung.info/2012/01/windows-loader-v21-by-daz.html .. က Windows Loader v2.1 By Daz ကို လက်ရှိသုံးနေပါတယ်.. .. ko nay min maung က အသေးစိတ် ညွှန်ပြထားတော့ လုပ်ရတာ လွယ်ကူပါတယ်...
window တင်နည်းကို ဒီမှာ ပြထားပေးပါတယ်.. http://www.nayminmaung.info/2011/09/windows-7.html အဆင်ပြေပါစေဗျာ..
နည်းပညာ တွေ ဖြန့်ဝေပေးတဲ့ ko nay min maung ကို ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်ဗျာ...
နေ လွင်အောင် September 2, 2012 at 9:14 AM
winminhtoo7 September 7, 2012 at 4:48 PM
အစ်ကို ဒေါင်းသွားပါပီ။ ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ဗျာ။ အစ်ကိုလဲ မရှိဟူသောစကား မကြားဘူးတဲ့သူ ဖြစ်ပါစေဗျာ။
lu aye September 17, 2012 at 11:36 PM
ko nay min thank အစ်ကို ဒေါင်းသွားပါပီ
Ko MinMin February 10, 2013 at 9:11 AM
thanks for your uploading. sorry for not telling thanks to your all uploads.
Kyaw Koko May 18, 2013 at 3:24 PM
ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ် Copyright law ဆိုတာရှိတာသိပေမယ့် ၀ယ်ပြီးတော့မှမသုံးနိုင်တာပဲလေ ကျေးဇူးပါ ကိုနေမင်း ............ Down သွားတယ်နော်
song! June 22, 2013 at 3:57 PM
kyaw thu hlaing November 11, 2013 at 10:19 AM
ထားဝယ်သားလေး February 28, 2014 at 1:02 AM
အစ်ကို တို့လိုမြန်မာသူ၇ဲကောင်းတွေရှိတော့ ကျွန်တော်တို့မြန်မာမျိုးဆက်သစ်လူငယ်လေးတွေအတွက် ဆေးကောင်းတစ်ခွက်ပါဘဲ